"Mgbe mmiri na-ezo", nke Teresa Viejo, aghụghọ aghụghọ nke uche na ebubo ihe omimi | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
«Mgbe mmiri na-ezo», site n’aka Teresa Viejo, atụmatụ aghụghọ uche jupụtara n’ihe omimi
Fewbọchị ole na ole gara aga hụrụ ìhè Mgbe mmiri na-ezo, akwụkwọ akụkọ ọhụrụ nke onye edemede na onye nta akụkọ Theresa Old. Mgbe mmiri na-ezo, bipụtara - Ndigbo, bu akwukwo nke ihe banyere ihe banyere ihunanya na ihe ezin’ulo, ihe nzuzu nke uche nke juputara na ihe omimi, nke onye n’agha ahu gha eche ihe omimi di iche iche nke agwakọtara n’etiti uwa na uwa nke ndi mo.
Teresa Viejo na-achọ ka onye na-agụ ya nwee ike ịgbanahụ kwa ụbọchị ma mikpuo onwe ya na akụkọ ahụ, bụrụ akụkụ nke atụmatụ ahụ. N’ime akwụkwọ ọgụgụ a, ihe ịma aka kasịnụ o nwere bụ imepụta akụkọ site na ncha, ma ndị edemede na nkata malitere site n'echiche ya, usoro nke ọ na-ekwupụta na ya nwere anụrị na nke ọ na-atụ anya ibunye ndị niile na-agụ ya.
"Enweghị ụdị arcane, oke obi ụtọ, enweghị atụ, aghụghọ na aghụghọ na mmiri dị ka Osimiri Cantabrian, oké osimiri gbara ọchịchịrị na nke a na-apụghị ịbanye na ya mgbe ihu igwe gbachapụrụ agbachapụ, mana nke obere obere oghere dị na paradaịs." Nke a bụ otú Teresa Viejo si kọwaa isi iyi nke "mmụọ nsọ ya" maka mmiri ozuzo, nke o gosipụtara ụnyaahụ na Club Prensa Asturiana na La Nueva España.
Nkọwa maka “Mgbe mmiri na-ezo”
Mgbe mmiri na-ezo na-akọ akụkọ Alma Gamboa Monteserin, nwa agbọghọ nọ n’afọ iri anọ na asaa gbara afọ iri abụọ na asaa wee gawa ebe ugwu ịchọ nna nna ya.
N’oge oyi nke 1946, Alma Gamboa gara n’ụlọ nke ndị nna nna ya ebe, kama udo nke ahụ ọ chọrọ nke ukwuu, mkpughe dị oke-egwu na-echere ya enweghị ike ịgbanahụ ya. N’ime ihe mgbagwoju anya ahụ nke bụ ndụ ya, n’oge na-adịghị anya ọ hụrụ foto nke otu nwa agbọghọ na-enweghị aha, mkpọmkpọ ebe nke ebe obibi gbara ọkụ na akwụkwọ dị omimi. Ọ dịghị nke ọ bụla n’ime nke na-ehichapụ mmetụta nke ịhụnanya na-emebi ihe.
I nwere ike ịgụ isi nke mbụ nke Mgbe mmiri na-ezo ebe a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » «Mgbe mmiri na-ezo», site n’aka Teresa Viejo, atụmatụ aghụghọ uche jupụtara n’ihe omimi
"The Girl on the Train", nke Paula Hawkings dere, akwụkwọ edemede nke oge anwụ a